उपमेयरको यस्तो लाज मर्दाे हर्कत : अनमीले छोडिन् जागिर – Bannigadhi Today
अछाममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रयास के छन् ? कुराकानी सहित
कमलबजार पिसीआर प्रयोगशालालाइ ५ लाख सहयोग
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामद्धारा ५४ थान कम्बल वितरण
अवसरबादिका पछि नलाग्न नेकपा नेता साउदको आग्रह
रहेनन अछाम कांग्रेसका नेता देवकोटा
क्यान्सर पीडित बुढाको उपचारका लागि ३८ हजार सहयोग
छैटौँ राष्ट्रिय योग दिवस अछाममा पनि मनाइयो
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मंगलसेन उपशाखाको सातौँ सभा सम्पन्न
कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम पढाउन बाटो खुल्यो
मेल्लेख बाल बिवाह #करेन्ट #थापा
उपमेयरको यस्तो लाज मर्दाे हर्कत : अनमीले छोडिन् जागिर
धनराज साउँद ६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार
जिल्लाको बुङल नगरपालिका उपमेयर मिना जागरीले आफुले स्वयमसेविकाको भत्ता नपाएको भन्दै कफलसेरी स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख शिवराज खठायतलाई गालीगलोज गरेकी छन् । कात्र्तिक महिनामा भिटामिन ‘ए’ खुवाएबापतको स्वयमसेविकालाई दिईने भत्ता नदिएको भन्दै खडायतलाई गालीगलोज गरेकी हुन् ।
सार्वजनिक अडियोमा उनले उपमेयर को हो भन्ने कुरा भेटमा चिनाई दिने भन्दै धम्की दिएकी छन् । अडियोमा उपमेयर जागरीले खडायतलाई ‘तेरो कुरा सुन्नुछैन’ भन्दै अपशब्द प्रयोग गर्दै गाली गलोज गरेकी छन् । सबै स्वयमसेविकको पैसा दिई सकेको भए पनि ‘तपाईलाई नभेटेका कारण पैसा दिन सकिएन’ भन्ने प्रसंगमा उपमेयर जागरीले अपशब्द प्रयोग गर्दै तुच्छ शब्द प्रयोग गर्दै गालीगलोज गर्न भ्याईन् ।
कुराकानीका सिलसिलामा उनले भुक्तानीका बेला किर्ते दस्तखत गर्न कुन कानुनले दिएको छ, भनेकी छन् । तर उपमेयरलाई दोहोर सुविधा लिन पाउने कानुनमा छैन भन्ने समेत थाहा छैन् । स्वास्थ्य चौकी प्रमुख खडायतले माफी माग्दा पनि उनको आक्रोश रोकिएन् । सविक कफलसेरी गा.वि.स वडा नं की स्वयमसेविका रहेकी उपमेयर जागरी हाल बुङल नगरपालिका उपमेयर हुन् । स्वयमसेविकाको पदबाट राजिनामा नदिएरै उनी उपमेयर भएकी हुन् । अहिले पनि उनी स्वास्थ्य चौकीले स्वयमसेविकालाई दिने भत्ता लिदैँ आएकी छन् ।
अगाडीको समयमा व्यवहारिक रुपमा घरमा सुत्केरी भएकी महिलालाई पनि सुत्केरी भत्ता दिदैँ आएको अडियोमा प्रष्ट छ । गरिब तथा आर्थिक अवस्था नाजुक भएकालाई व्यवहारिक रुपमा दिदाँ फरक नपर्ने भन्दै उपमेयर जागरीले चौधरीलाई आग्रह गरेको तर अनमी चौधरीले दिन नमिल्ने बताएपछि अनमीलाई धम्क्याएको प्रष्ट हुन्छ । अगाडीको आर्थिकको जिम्मा आफुलाई थाहा नभएको भन्ने अनमीको जवाफमा उपमेयर जागरीले ‘म संग बढी फुर्ति लगाउने, तेरो बाउले दिएको उपमेयर हो ? अहिल्यै जागिर छोडेर गईहाल’ भनेकी छन् ।
सामान्य भनाभन भएको स्विकार गर्दै उपमेयर जागरीले स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिको बैठकले सबै कुरा मिलाई सकेको र अनमी चौधरीलाई जागिर नछोडन फोनमार्फत आग्रह गरेको बताईन् । “जागीर छोडेर गयो भन्ने सुनेकी छु । मैले आक्रोशमा केही नराम्रो शब्द बोलेर गल्ती भएको भए पनि राजनैतिक प्रतिसोधका कारण विपक्षीले नानाथरी आरोप लगाएर बदनाम गर्न खोजे” उनले भनिन् ।
युवती हत्या प्रकरणको विषयलाई लिएर जलविद्युत आयोजनामा तोडफोड
कांग्रेसद्वारा महाधिवेशनको मिति सार्ने तयारी
क्याम्पस र विद्यालय पनि खुल्न सकेनन :विप्लव बन्दको सुदूरपश्चिममा विहानैदेखि प्रभाव
२६ करोड बढि बजेट बिनियोजन गर्दै बान्नीगढी गाउँपालिकाको गाउँ सभा सम्पन्न
भयाभह बन्दै कोरोना,आज मात्रै थप ५ सय २५ जनामा कोरोना संक्रमण
जनप्रतिनिधि नै छुवाछुतबाट पीडित
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड कमिसनका लागि यसरी गरे सेटीङ (अडियो सहित)
नेकपा कैलाली अध्यक्ष थापाको प्रेमलिला- तिमीसंग हुनुपर्ने सबै भइसकेको छ अव फेरि कस्तो माया गर्ने (अडियो)
धनराज साउँद २५ आश्विन २०७६, शनिबार
अछाममा २१ वर्षीया एक महिलाको छाउगोठमा ज्यान गयो (स्थलगत अडियो सहित)
धनराज साउँद १६ मंसिर २०७६, सोमबार
परस्त्रीसँग अवैध सम्बन्ध राखेको अभियोगमा अछाममा काँग्रेस वडा सभापती पक्राउ
धनराज साउँद १८ श्रावण २०७६, शनिबार
हेलीकप्टरबाट काठमाण्डौँ लगीएका नेपाली सेनाको मृत्यु
धनराज साउँद २४ चैत्र २०७६, सोमबार
अछाममा घुस खाएको तीन लाख रकम फिर्ता गरे ईन्जिनियरले
धनराज साउँद ७ श्रावण २०७६, मंगलवार
© 2021, Bannigadhi Today, All Rights Reserved | Design with by Webpal